ပွဲကောင်းတွေနဲ့ ရင်ခုန်စရာကောင်းခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတကာခြေစမ်းပွဲစဉ်များ
အာဂျင်တီးနားကို ဘရာဇီးလ် အနိုင်ရခဲ့ပြီး ဘယ်လ်ဂျီယံနဲ့ နယ်သာလန်တို့ သရေကျခဲ့ကြတဲ့ ခြေစမ်းပွဲစဉ်များ
17 Oct 2018 . 12:05 PM
ဒီတစ်ပတ်မှာ ကစားခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတကာခြေစမ်းပွဲစဉ်တွေမှာတော့ ပွဲကောင်းတွေနဲ့ အသင်းကြီးအချင်းချင်း ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ ပွဲတွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ တောင်အမေရိကရဲ့ ဒါဘီလို့ တင်စားရမယ့် အာဂျင်တီးနားနဲ့ ဘရာဇီးလ်ပွဲမှာတော့ ဘရာဇီးလ်က ( ၀ – ၁ )နဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး ဥရောပရဲ့ နာမည်ကျော်အသင်းနှစ်သင်း ဖြစ်တဲ့ ဘယ်လ်ဂျီယံနဲ့ နယ်သာလန်တို့ပွဲကတော့ တစ်ဖက်(၁)ဂိုးစီနဲ့ သရေရလဒ်ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။
အာဂျင်တီးနား ၀ – ၁ ဘရာဇီးလ်
ဒီပွဲစဉ်မှာတော့ အာဂျင်တီးနားအသင်းရဲ့ ပွဲထွက်လူစာရင်းဟာ အားရစရာသိပ်မရှိခဲ့ဘဲ ဘရာဇီးလ်အသင်းကတော့ အင်ပြည့်အားပြည့်နဲ့ ပွဲထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ အာဂျင်တီးနားအသင်းကို အီကာဒီ Icardi ၊ ဒီဘားလား Dybala တို့ကဦးဆောင်လာခဲ့ပြီး ဘရာဇီးလ်အသင်းကိုတော့ နေမာ Neymar ၊ ဖေမီနို Firmino ၊ ဂျေးဆု Jesus နဲ့ ကော်တင်ဟို Coutinho တို့ကဦးဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ အပြန်အလှန်ထိုးဖောက်မှုတွေ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ကြပေမယ့် ဘရာဇီးလ်အသင်းက အာဂျင်တီးနားအသင်းကို အသာစီးနဲ့ ကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဘရာဇီးလ်အသင်းရဲ့ ထိုးဖောက်ကန်သွင်းမှုတွေကိုလည်း အာဂျင်တီးနားဂိုးသမား ရိုမဲရိုး Romero လက်စွမ်းပြကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဘရာဇီးလ်အသင်းအတွက် အဖိုးတန်အနိုင်ဂိုးကိုတော့ ပွဲချိန်(၉၃)မိနစ်မှာ နေမာရဲ့ ထောင်ကန်ဘော ကန်တင်မှုကနေ မီရန်ဒါ Miranda ကခေါင်းတိုက်သွင်းယူခဲ့တာပါ။
ဘယ်လ်ဂျီယံ ၁ – ၁ နယ်သာလန်
ဘယ်လ်ဂျီယံနဲ့ နယ်သာလန်တို့ရဲ့ ပွဲစဉ်ကတော့ သရေနဲ့သာပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။ နှစ်သင်းလုံးဟာ အဓိကကစားသမားတွေနဲ့ အရန်ကစားသမားတွေကို ရောစပ်ပြီးပွဲထွက်လာခဲ့ကြတာပါ။ နည်းပြ ရော်နယ်ကိုးမန်း Ronald Koeman လက်ထက်မှာ တိုးတက်မှုတွေရှိလာတဲ့ နယ်သာလန်အသင်းဟာ ပုံစံကောင်းရနေတဲ့ ဘယ်လ်ဂျီယံ ကို သရေကစားနိုင်ခဲ့တာကြောင့် အရင်လိုနယ်သာလန်အသင်းကို ပြန်တွေ့ရဖို့ နီးစပ်နေပြီလို့ ဆိုရမှာပါ။ ဘယ်လ်ဂျီယံအသင်းဟာ ပိုကောင်းတဲ့အသင်းဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် နယ်သာလန်အသင်းကလည်း အကောင်းဆုံး တုံ့ပြန်ကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက် ဦးဆောင်ဂိုးကို ပွဲချိန်(၅)မိနစ်မှာ မာတင်စ် Mertens ကကောင်းမွန်တဲ့ ကန်ချက်နဲ့သွင်းယူခဲ့သလို နယ်သာလန်အသင်းအတွက် ချေပဂိုးကိုတော့ ပွဲချိန်(၂၇)မိနစ်မှာ ဒီပိုင်း Depay ရဲ့ ဖန်တီးမှုကနေ ဂရိုးနေဗယ် Groeneveld ကသွင်းယူခဲ့တာပါ။
Japan4–3Uruguay
South Korea2–2Panama
Cambodia 1 –2Singapore
Indonesia 1 – 1 Hong Kong
Laos 1 –4Mongolia
China2–0Syria
Malaysia0– 1 Kyrgyzstan
U.A.E.0–2Venezuela
Oman0 –0Ecuador
Iran2– 1 Bolivia
Bahrain4– 1 Myanmar
Denmark2–0Austria
Sweden 1 – 1 Slovakia
Colombia3– 1 Costa Rica
USA 1 – 1 Peru
Mexico0– 1 Chile
Photo: Goal.com , The Independent , Bleacher Report
အာဂငျြတီးနားကို ဘရာဇီးလျ အနိုငျရခဲ့ပွီး ဘယျလျဂြီယံနဲ့ နယျသာလနျတို့ သရကေခြဲ့ကွတဲ့ ခွစေမျးပှဲစဉျမြား
ဒီတဈပတျမှာ ကစားခဲ့တဲ့ နိုငျငံတကာခွစေမျးပှဲစဉျတှမှောတော့ ပှဲကောငျးတှနေဲ့ အသငျးကွီးအခငျြးခငျြး ထိပျတိုကျတှဆေုံ့ခဲ့တဲ့ ပှဲတှပေါဝငျခဲ့ပါတယျ။ တောငျအမရေိကရဲ့ ဒါဘီလို့ တငျစားရမယျ့ အာဂငျြတီးနားနဲ့ ဘရာဇီးလျပှဲမှာတော့ ဘရာဇီးလျက ( ၀ – ၁ )နဲ့ အနိုငျရရှိခဲ့ပွီး ဥရောပရဲ့ နာမညျကြျောအသငျးနှဈသငျး ဖွဈတဲ့ ဘယျလျဂြီယံနဲ့ နယျသာလနျတို့ပှဲကတော့ တဈဖကျ(၁)ဂိုးစီနဲ့ သရရေလဒျထှကျပျေါခဲ့ပါတယျ။
အာဂငျြတီးနား ၀ – ၁ ဘရာဇီးလျ
ဒီပှဲစဉျမှာတော့ အာဂငျြတီးနားအသငျးရဲ့ ပှဲထှကျလူစာရငျးဟာ အားရစရာသိပျမရှိခဲ့ဘဲ ဘရာဇီးလျအသငျးကတော့ အငျပွညျ့အားပွညျ့နဲ့ ပှဲထှကျလာခဲ့ပါတယျ။ အာဂငျြတီးနားအသငျးကို အီကာဒီ Icardi ၊ ဒီဘားလား Dybala တို့ကဦးဆောငျလာခဲ့ပွီး ဘရာဇီးလျအသငျးကိုတော့ နမော Neymar ၊ ဖမေီနို Firmino ၊ ဂြေးဆု Jesus နဲ့ ကျောတငျဟို Coutinho တို့ကဦးဆောငျလာခဲ့ပါတယျ။ အပွနျအလှနျထိုးဖောကျမှုတှေ ပွုလုပျနိုငျခဲ့ကွပမေယျ့ ဘရာဇီးလျအသငျးက အာဂငျြတီးနားအသငျးကို အသာစီးနဲ့ ကစားနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ဘရာဇီးလျအသငျးရဲ့ ထိုးဖောကျကနျသှငျးမှုတှကေိုလညျး အာဂငျြတီးနားဂိုးသမား ရိုမဲရိုး Romero လကျစှမျးပွကာကှယျနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ဘရာဇီးလျအသငျးအတှကျ အဖိုးတနျအနိုငျဂိုးကိုတော့ ပှဲခြိနျ(၉၃)မိနဈမှာ နမောရဲ့ ထောငျကနျဘော ကနျတငျမှုကနေ မီရနျဒါ Miranda ကခေါငျးတိုကျသှငျးယူခဲ့တာပါ။
ဘယျလျဂြီယံ ၁ – ၁ နယျသာလနျ
ဘယျလျဂြီယံနဲ့ နယျသာလနျတို့ရဲ့ ပှဲစဉျကတော့ သရနေဲ့သာပွီးဆုံးခဲ့ပါတယျ။ နှဈသငျးလုံးဟာ အဓိကကစားသမားတှနေဲ့ အရနျကစားသမားတှကေို ရောစပျပွီးပှဲထှကျလာခဲ့ကွတာပါ။ နညျးပွ ရျောနယျကိုးမနျး Ronald Koeman လကျထကျမှာ တိုးတကျမှုတှရှေိလာတဲ့ နယျသာလနျအသငျးဟာ ပုံစံကောငျးရနတေဲ့ ဘယျလျဂြီယံ ကို သရကေစားနိုငျခဲ့တာကွောငျ့ အရငျလိုနယျသာလနျအသငျးကို ပွနျတှရေ့ဖို့ နီးစပျနပွေီလို့ ဆိုရမှာပါ။ ဘယျလျဂြီယံအသငျးဟာ ပိုကောငျးတဲ့အသငျးဖွဈခဲ့ပမေယျ့ နယျသာလနျအသငျးကလညျး အကောငျးဆုံး တုံ့ပွနျကစားနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ဘယျလျဂြီယံအတှကျ ဦးဆောငျဂိုးကို ပှဲခြိနျ(၅)မိနဈမှာ မာတငျဈ Mertens ကကောငျးမှနျတဲ့ ကနျခကျြနဲ့သှငျးယူခဲ့သလို နယျသာလနျအသငျးအတှကျ ခပြေဂိုးကိုတော့ ပှဲခြိနျ(၂၇)မိနဈမှာ ဒီပိုငျး Depay ရဲ့ ဖနျတီးမှုကနေ ဂရိုးနဗေယျ Groeneveld ကသှငျးယူခဲ့တာပါ။